Tetikasa tsara indrindra 25 Wolf Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
Tetikasa tsara indrindra 25 Wolf Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 11, 2016
Te-hijery hafa amin'ny tatoazy ve ianao? Nahita olona marobe izahay nandao ireo rafitra tsotra na drafitra toy ny raozy sy ny lakroa. Ary ahoana ny amboadia? Ny amboadia dia tatoazy tokana tsy ahafahanao manohitra.
Ny tavy Wolf dia azo ampiasaina hiresahana momba ireo mitady ny fahafahana. Ny tatoazy dia midika koa hoe fitiavan-tena sy fanajana, hery ary fahamarinan-toetra. Wolf ihany koa dia midika hoe ala, fianakaviana, fahefana, fikorontanana, fiarovana, fahalalahana, tafahoatra ary maro hafa. . Any Siberiana, ny #wolf dia voantso hiaro ny tsy fananan-jaza ataon'ny ankizy - ary indrindra izy io dia entina hanomezana toky ny fiterahana. Tany amin'ny Eurasia taloha, ny amboadia dia mpiaro ny tsiambaratelo. Toa raha nilaza tamin'ny amboadia iray ny tsiambaratelonao ianao, dia nesorinao ny enta-mavesatra entin'ny entana ary ny amboadia dia hiaro mandrakizay.
Ireo olona mandeha ho an'ny amboadia #tattoo dia tsy fehezin'ny fitiavan-tanindrazana satria mino ny hevitra. Ny fitiavana dia mampiditra an'ity tatoazy ity mba hampisehoana ny heriny. Ny amboadia dia heverina ho mpiaro ireo maty. Izany no mahatonga azy ireo matetika hita any amin'ny fasana na fasana.
1. Tapa-tiana mahavariana sy mahavariana ny tato ho an'ny tato ho an'ny ankizilahy
Tato ho ato dia lasa malaza ny tatoavin'ny biby. Misy karazana tatoavin'ny biby izay hitantsika amin'ny ampahany amin'ny vatan'ny olona.
2. Cross tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-kevitra ho an'ny lehilahy
Tsy mahagaga anao intsony ny mahita tatoazy toy izany. Nandritra ny taona maro, nanova ny fahaizan'izy ireo ny artista ary nahay namorona endrika tatoazy.
3. Wolf eo ambanin'ny volana ary ny tontolon'ny tava feno tebiteby amin'ny sandriny
Tsy mampaninona anao raha vehivavy na lahy ianao raha te haka sary. Izany no antony mahatonga antsika mahita olona maro mampiasa io tatoazy io.
4. Ny amboadia sy ny amboadia mahery Tattoo ho an'ny lehilahy amin'ny antsasa-tapisaka
Ny tatoazy dia manan-danja lalina sy dikany lalindalina ary izany dia mahatonga ny tatoazy ho malaza iray.
5. Pejy fanolorana karazana amboadia tato anaty tattoo miaraka amin'ny hafatra
Ny tatoavin'ny tavy dia mifandraika amin'ny herisetra, hery ary hery. Ny tatoazy dia tonga amin'ny #design sy loko samihafa.
6. Tovolahy tetikasan'ny tetikasam-bokatra ho an'ny lehilahy
Ianao no ilay mifidy avy amin'ireo tetikasa maro izay any ivelany. Ny ampahany manontolo amin'ny vatana dia afaka mifanaraka amin'ny endrika tattoo. Nahita olona maro izahay naka ity tatoazy ity ary nanova azy ho zavatra mahavariana eo amin'ny vatany.
7. Cute Wolf teti-kevitra ho an'ny vehivavy
Ny toerana voalohany hanombohana ny fanaovana tatoazy raha toa ka ataonao voalohany indrindra ny manomboka amin'ny dikan-teny kely kokoa.
8. Mamoaka tapa-tsavon'ny tontolon'ny afo ho an'ny zazavavy eny an-tsambo
Izany dia hanampy anao hamarinina raha mahazo aina amin'ny tatoazy ianao na te hanala anao. Ny tato-tenan'ny permanente dia sarotra ny manala ary indraindray, mety mamela marary raha tsy vita amin'ny fikarakarana.
9. maro loko Tolo-toto fanosihosena volomparasy ho an'ny zazalahy
Betsaka ny olona manandrana manao tatoazy matetika no mampiasa ny ranomainty.
10. Tattoo mahagagam-behivavy #idea ho an'ny zazalahy eo an-tsoroka
Ny ranomainty vonjimaika dia mora mora kokoa amin'ny fanaintainana kely kokoa raha oharina amin'izay azonao raha toa ka mampiasa tatoazy maharitra ianao.
11. Volon'ondry miloko volomparasy mivolombolamena ho an'ny vehivavy
Izany no mahatonga ny antony ilainao hisainana mialohan'ny fahazoana tatoazy.
12. Tovolahy tolo-tavy feno taolam-paty ho an'ny zazavavy
Ny tontolon'ny aterineto dia manana tattoo marobe izay azonao atao. Mety mila minitra vitsy na ora arakaraka ny fomba tianao hijerena ny tatoazy ianao. Rehefa vonona ny hanao tatoazy tahaka izao ianao dia tsara kokoa raha manontany anao ianao alohan'ny hanoratana azy.
Tsy ny tatoazy rehetra no mety ho anao, Izany no antony ananantsika manam-pahaizana maro an-tserasera izay hanampy anao hahazo ny tatoazy tsara indrindra izay azonao andramena.
13. Wolf tattoo arm design hevitra ho an'ny lehilahy
Misy karazana amboadia samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny tsirairay amin'ireo amboadia ireo dia maneho zavatra samihafa ary manana ny hafatr'izy ireo rehefa tonga amin'ny tatoazy. loharanon-tsary
14. Tato ho an'ny olombelona sy ny tontolon'ny tavy ho an'ny lehilahy amin'ny tànan'akanjo
Rehefa vonona ny hisafidy io biby io ho toy ny tatoazy, tokony hiala sasatra ianao ary hikaroka fikarakarana ny karazana tattoo an-dabiera izay hofidianao. loharanon-tsary
15. Tapa-kevitra ho an'ny ankizilahy sy ankizivavy an-tato ho an'ny ankizivavy
Nanaja sy natahotra ny voromahery. Ny tontolon'ny tavy dia maneho ny tsy fivadihana, ny herimpo ary ireo toetra tsara izay mahavariana na dia biby mahery vaika aza. loharanon-tsary
16. Sexy flower sy tattoo volomparasy amin'ny volon'ny ankizivavy
Misy karazana sy endrika samihafa ahafahan'ireo tatoazy ireo. Raha mieritreritra ny hahazo tattoos kely mahagaga ianao, dia mety tsy maintsy mandeha amin'ny tatoazy izay manintona anao. loharanon-tsary
17. Tapa-tombo-tsoavaly tapa-tavo-kofehy amin'ny lehilahy ho an'ny lehilahy
Azo atao amin'ny endrika taratasy na sary. Ny artiste dia afaka manintona izany na eny amin'ny sisin'ny rantsantanana. loharanon-tsary
18. Tovolahy tolo-tattoo tato ho an'ny ankizivavy
Afaka misafidy ny ho mpilalao mahay ianao rehefa mifidy ny tatoavin'ny amboadia. Aza manahy ny habeny. loharanon-tsary
19. vavony tattoo tattoo tattoo ho an'ny vehivavy
Azonao atao ny manapa-kevitra hoe hatraiza no tadiavinao ny amboadiao eo amin'ny hodinao. Noho ny fanampian'ny mpanakanto mahay dia azonao antoka fa hahazo izany tatoazy mahafinaritra eo amin'ny hodinao izany. loharanon-tsary
20. Pine sy tattoo tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy
Manana ny Tattoo Wolf isika izay maneho ny New Moon. Hitantsika bebe kokoa izany noho ny fahitalavitra Twilight TV. Ny mpankafy sasany amin'ny fampisehoana dia mampiasa izany. loharanon-tsary
21. Tapa-kofehy vita printy ho an'ny lohataona ho an'ny zazavavy
Ny sary dia miankina amin'ny mpanakanto anao sy ny fomba itiavanao azy. Misy ny tôpônin'ny amboadia foko izay mampiasa olona maro satria tsy manahy izy. loharanon-tsary
22. manodidina ary tonta tato ho an'ny tonta ho an'ny vehivavy amin'ny sandriny
Izany no antony ilazantsika fa samy hafa ny karazam-borona ary ireo tatoazy dia afaka manavaka azy ireo mora foana. Misy ny karazana Celtic izay tsy fahita firy. loharanon-tsary
23. Super tompo-tola mahagaga tato anaty tononkira
Avy eo dia ny amboadia izay tena samy hafa amin'ny karazana amboadia fantatrao. Iza amin'ireto tavy marobe ireto no tianao hosotroina? loharanon-tsary
24. Ny tebitebin'ny metamorphosing tato tapa-kevitra eo amin'ny sandriny
25. Tovolahy tapa-tsavoka ho an'ny lehilahy eo an-doha
Tsy misy karazam-bolo tian'ny amboadia izay nofidinao izay tsy dia mampihetsi-po. Afaka mampiasa loko hafa amin'ny amboadia ianao mba hahatonga anao ho samy hafa amin'ny famoahana ny famoronana anao. loharanon-tsary
tattoosTatoazy ara-jeometrikaarrow tattoomozika tatoazytattoo eyefitiavana tatoazytattoos armtato ho an'ny vatofantsikatattoos rahavavyhenna tattootattoos backcat tattooseagle tattoostanana tatoazytattoos crossHeart Tattoostattoos sleevediamondra tattootattoo infinitykoi fish tattootatoazy fokoTattoo Feathermoon tattoosanjely tattoostatoazy voninkazomasoandro tatoazytattoo octopustattoos mpivadytattoo cherry blossomloto voninkazotattoosNy zodiaka dia mampiseho tatoazyrip tattooslion tattoostattoos voronatattoos mahafatifatyscorpion tattooraozy tatoazytattoo ideastattoos footelefanta tatoazynamana tattoos tsara indrindratatoazy lolotattoos ho an'ny lehilahytatoazy ho an'ny zazavavytratra tatoazycompass tattooAnkle Tattoostattoo watercolormehndi design